Digniinta Farmaajo kadib sidee ayay Soomaaliya uga falcelin kartaa faragelinta Imaaraadka? - Caasimada Online
Home Warar Digniinta Farmaajo kadib sidee ayay Soomaaliya uga falcelin kartaa faragelinta Imaaraadka?
Digniinta Farmaajo kadib sidee ayay Soomaaliya uga falcelin kartaa faragelinta Imaaraadka?
Digniinta Madaxweyne Farmaajo
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo Sabtidii khudbad u jeediyay Baarlamaanka Federaalka ah ayaa dalalka dibadda uga digay faragelin, waxa uuna sheegay in aan la aqbali doonin heshiis aan loo marin waddada saxda ah, isaga oo sheegay in shacabka Soomaaliyeed yihiin waddaniyiin.
“Soomaaliya waxaa ay diyaar u tahay Maalgashi iyo ganacsi ay la wadaagto caalamka, cid kasta oo dooneysa inay maalgashato Soomaaliya waa inay oggolaansho ka hesho hey’adaha sharciga ah ee dowladda, waxaan uga digayaa waddamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed”.
Dacwadda ay Soomaaliya u gudbisey Jaamacadda Carabta
Todobaadkii hore, dowladda Soomaaliya ayaa warqad dacwo oo ka dhan ah Imaaraadka u gudbisay jaamacadda Carabta, Warqaddan oo ay xaqiijiyeen diblomaasiyiin ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa waxaa ku xusan in ergada Soomaaliya ee Jaamacadda Carabta ay dalbadeen in ajendaha kulanka Wasiirrada Jaamacadda Carabta ee Qaahira lagu daro qodob ku saabsan Dekadda Berbera iyo heshiiska Xaqdarrada ah.
Qoraalka loo gudbiyay Jaamacadda Carabta waxaa lagu xusay in dowladda federaalka ah ay si rasmi ah u sheegtay in heshiiska aanay qayb ka ahayn, cid ku matashana aaney jirin, iyada oo heshiisku ka hor imaanayo qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka ah iyo in uu yahay faragelin arrimaha gudaha iyo midnimada Soomaaliya.
Qaramada Midoobey oo loo gudbiyey warbixin ku saabsan faragelinta Imaaraadka ee Soomaaliya
Jannaayo sanadkan hey’adda madaxabannaan ee Qaramada Midoobey u qaabilsan kormeerka ayaa Golaha Ammaanka ugu baaqday in wax laga qabto faragelinta Imaaraadka ee Soomaaliya iyo in Abu Dhabi doonayso in ay qasto xasiloonida iyo dimuqraaddiyadda ka jirta dalka.
Hey’adda oo arrintan u bandhigtay safiirrada joogtada ah ee Golaha Ammaanka waxaa ay sheegtay in Imaaraadka uu si aan ka gambasho laheyn u faragelinayo arrimaha Soomaaliya isaga oo lacag laaluush ah siinaya siyaasiyiin iyo xildhinaanno kala shaqeynaya sidii loo ridi lahaa xukuumadda.
Qaramada Midoobey qoraalkooda waxaa ku jiray in Imaaraadku damacsan yihiin afgambi si ay u maamulaan dalkan Geeska Afrika taasi oo ka hor imaaneysa xeerarka Qaramada Midoobey, isla markaana gobolka ka abuureysa xasiloonni darro.
Waxaa kale oo Imaaraadka lagu eedeeyay inay hub iyo saanad siiyaan kooxaha argagaxisada, waana arrin kale oo imaaraadka ku jabiyay qaraarka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya lagu saaray cunaqabateynta hubka.
Maxay Hey’ada Dowliga Ka qabaan faragelinta arrimaha dal kale?
Qaramada Midoobey: Hey’addan marka laga soo tago nabad-ilaalinta iyo xallinta murannada waxaa ay ka hortagtaa wax walba oo keenni kara dagaal, waxaa kale oo xubnaha ururkan laga mamnuucay in ay ku xadgudbaan dhulka dalalka xubnaha ka ah
Dastuurka Midowga Afrika: Hadafyada loo aasaasay Midowga Afrika marka laga soo tago midnimada Afrikaanka iyo iskaashiga guud waxaa ka mid ahaa: ilaalinta qarannimda, madaxbannaanida iyo dhulka dowladaha xubnaha ka ah, in la ixtiraammo xadka ay dowladuhu guumeystaha ka dhaxleen, in dal aanu faragelin arrimaha gudaha dal kale iyo in wada noolaashiyo laga shaqeeyo.
Dastuurka Jaamacadda: Mabaa’dida Jaamacadda Carabta waxaa ugu muhiimsan in dalalku aanay faragelin isku sameyn, oo si ixtiraam iyo sinnaan ah ku wada shaqeeyaan.
Marka laga soo tago xeerarka caalamiga ah, waxaa Soomaaliya u furan waddooyin kale oo ay xaqa ku raadsan karto, waxaa ka mid ah:
Diblomaasiyadda: Sida ay sheegeen ilo diblomaasiyadeed dal xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa soo jeediyay in uu kala dhex-galo Muqdisho iyo Abu-dhabi, waa fursad xiisadda loogu dhameyn karo qaab diblomaasiyadeed.
Go’aan Adag: Dowladda Soomaaliya waxaa ay horay xiriirka ugu jartay Iran ka dib markii safaaraddooda lagu eedeeyay fara-gelinta arrimaha Soomaaliya, Imaaraadka marka laga soo tago heshiisyada waxaa uu sameeyaa arrimo xad-gudub ku ah qarannimada Soomaaliya, in safiirka la waco, in digniin la siiyo iyo cadaadis la saaro Abu-dhabi waa arrin u furan Soomaaliya.
Baarlamaanka: Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa waxaa uu qabaa in baarlamaanku uu ka hadlo heshiisyada sharci-darrida ah ee Imaaraadka isaga oo intaas raaciyay in ay ku xad-gudbeen qarannimada Soomaaliya. Dalxa waa uu ka hadlay in soojeedinta ka hadlidda Imaaraadka ay ka iman karto xukuumadda ama baarlamaanka gudihiisa, isaga oo hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in loo baahan yahay in laga hadlo dhammaan heshiisyada sharci-darrida ah ee la galay sida kan Dekedda Boosaaso.
Is- afgarad Soomaaliya iyo Somaliland: Arrinta Berbera waxaa ku heshiin kara Soomaaliya iyo Somaliland, waxaa ay qeyb ka noqon kartaa qodobbada ay tahay in laga wada hadlo marka ay labada dhinac wada hadlayaan.
Cadaadis Dowli Ah: Soomaaliya waxaa ay haysataa fursad ay hey’daha caalamiga ah uga dacwoon karto Imaraadka, waa fursad furan, Jaamacadda Carabta, Qaramada Midoobey iyo Ururrada Dowliga ah waxaa ay la safan yihiin Soomaaliya. Sidaasi darteed, Soomaaliya waxa ay dacwo u gudbin kartaa Maxkamadda Caalamiga ah si lamid ah sidii ay Kenya dacwadda Badda uga gudbisey.
Ugu dambeyntii, waxaa muhiim ah in sida Imaaraadka loo cadaadinayo, loo cadaadiyo Itoobiya oo heshiiska qayb ka ah, waxaa kale oo muhiim ah in lagu xisaabtamo tallaabada ay qaadi karto Abu Dhabi oo ay ku nool yihiin, kana ganacsadaan Soomaali badan, in la ilaaliyo isku-dheellitirka qarannimada iyo danaha Soomaaliya uga xiran Imaaraadka waxaa ay u baahan tahay fahan istaraatijiyadeed iyo karti.